Kukunda kwaEric Adams kuri 'kutsanangura nguva' yevatungamiriri vatema muNew York
2021-07-13 New york
Vamiriri vevatema vakagadzirira kuzadza dzimwe nzvimbo dzakasarudzika muNew York, kusanganisira meya, gweta reruzhinji, uye maviri emagweta mashanu eguta...
Mishonga inokonzeresa kusagadzikana kwe erectile: mhando uye kurapwa
Zvinhu zvinoverengeka zvinogona kukonzera kana kuunza kusagadzikana kwe erectile. Muenzaniso mishonga iyo munhu anotora. Zvinodhaka zvinokanganisa libido, kuyerera kweropa, uye nhengo yebonde inokwanisa kuwedzera kuitika kwekusagadzikana kweErectile dysfunction (ED) kutadza kuwana kana kuchengetedza...
Scarlet fever: zvinokonzera, zviratidzo, kurapwa uye kunetseka
Isu tinosanganisira zvigadzirwa zvatinofunga kuti zvinobatsira kuvaverengi vedu. Kana iwe ukatenga kuburikidza nehukama pane ino peji, isu tinogona kuwana diki komisheni. Heano maitiro edu. Yakasiiwa isina kurapwa, inogona dzimwe nguva kutungamira kumatambudziko akakura...
Gangren: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Gangrene inoitika kana kushaikwa kweropa rakazara okisijeni kuchikonzera kufa kwetishu mune chimwe chikamu chemuviri, kazhinji maoko kana tsoka, uye mamiriro akakomba anogona kutungamira kukumurwa kwemaoko kana kufa. Anoda kurapwa nekuchimbidza kuti amise kupararira kwekufa kwechimiro nekukurumidza ...
England vs Italy live rukova: maitiro ekuona Euro 2020 yekupedzisira yemahara pamhepo kubva chero kupi - yechipiri hafu
Luke Shaw yeminiti-yechipiri chinangwa chinoparadzanisa zvikwata mu2021 UEFA European Championship grand fainari. Gareth Southgate's Shumba Nhatu dzinokwana kuseri kwavo, kana Roberto Mancini's Azzurri achakanganisa pati? Tiri pano kuzotsanangura maitiro ekuona nhepfenyuro yeEngland vs Italy inorara...